सन्तान एक, रूप अनेक- साधु रुपि फटाहा | khabarsamaya.com
सन्तान एक, रूप अनेक- साधु रुपि फटाहा
Sunday, August 18th, 2019, 1:49 pm
संसारको भुगोल, वातावरण, वस्तु एकै प्रकारको नभए जस्तै हामी माझमा पनि एकै प्रकारको व्यक्ति र एकै विचार पाउनु असम्भव जस्तै छ । त्यस्तै भिन्नताको बीचमा हाम्रो समाजमा रहेका एक पात्र हुन् भिक्षा ग्रहण गर्दै जीवन चलाउने जोगी वा साधु।
दिनहुँ जसो हाम्रो घर दैलोमा केही दानयोग्य वस्तु, रुपैयाका लागि भिक्षा माग्ने, आफ्नो बेली विस्तारा सुनाउदै खाध्य सामाग्री र लत्ता कपडाको आश गर्ने व्यक्ति हुन जोगी । कोही करले हुन्छन, कोही बल लगाउने सामथ्र्य नभएर त कोही परिश्रम गर्ने भोक नभएर । कोही हेर्दा झुम्रे पहिरनमा सजिएका, कोही साधु सन्तको रुपमा बाटोमा हिँडिरहेका पदयात्रीलाई पछ्याउँदै सहयोगको याचना गर्नेहरु । यस्तै–यस्तै अनेकन रुप छन् जोगीका । वास्तवमा ती सबै जोगी, योगी वा दानबाट प्राप्त सामग्रीले जीवन चलाउने पात्र हुँदैनन् ।
कुरा हो एक साँझको । घरायशी प्रयोजनको सामग्रीको खोजीमा म बजार पुगेको थिए । बजारमा साँझको चहल–पहल थियो । सबै आफ्नो काममा व्यस्त थिए । सब हतारोमा थिए । मानौँ समयको गति भन्दा चलायमान छन् उनीहरुको हतारो । सर–सामान किन्ने, मिलाउने र आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने सबै मानिसहरु हतारोमा छन् । त्यही हतारोबीच गेरु वस्त्र धारण गरेका ‘साधु’ । हस्याङ–फस्याङ गर्दै एक पसलको काउण्टरमा आइपुग्छन् । साँझको समय म अगरबत्तीको खोजीमा नजर डुलाउदै थिए । मेरो नजर काउण्टर अनि साधुमा ठोक्किन पुग्छ । हतारोमा रहेका साधु आफ्नो झोलाबाट केही थान पैसाको मुठ्ठा निकाल्दै पसलेको हातमा थमाउँछन् र भन्छन, ‘ल शाहुजी आज हामीलाई यती पैसाको दिहाल्नोस्’ । पसले पनि पैसाको मुठ्ठा तिर नजर फ्याँक्दै भन्छन्, ए… आज त टन्नै भएछ त भईया जि !’ पसले पैसा गन्न तिर लाग्छ । साधु मुस्काउँदै पसलेको अघिल्तिर उभिरहन्छन् । मुठाबाट पाँच दस को नोट मिलाउदै पसलेले ‘चालिस, पचास’ भन्दै आफ्नो गन्ति सात सय एकाउन्न मा टुङ्ग्याउछन । र भन्छन्, ‘ल लिनुस भईया जि’ ।
नोटको गन्ति सकिए पछि पसलेले उनको सामुन्ने पैसा थमाउनु अघि नै साधु आफ्नो पोल्टामा भएको सिक्का पैसा झिक्छन् । छिन्द्रिङ्ग…..छिन्द्रिङ्ग….. सिक्काको अवाज आउछ । सिक्का भुँइमा झर्नासाथ परेवाले चारो टिपे झैँ पसलेले फेरी गन्ती सुरु गर्छन एक, दुई, तीन….. । गन्ति एक सय बत्तिस मा पुगेर टुङ्गिन्छ ।
यो दृश्य नियालिरहँदा म भित्र प्रश्नको भूमरी मडारीरहेको छ । उब्जेको कौतुहलता र प्रश्नको बाढीलाई शान्त पार्दै म फ्याट्ट मुख फोर्दै म सोध्छु, ‘बाबा कती दिन मागेको पैसा हो यो ?’ साधुले हिन्दी लवजमा भन्छन् ‘बेटी आजको….’ । म मनमनै कुरा खेलाई राखेको हुन्छु तर कती बेला त्यस मन भित्रका केही शब्द मुख बाहिर निस्किन्छ पत्तो पाउँदिन । म फेरी सोध्न पुग्छु ‘आम्माम्मा एक दिनको यती धेरै ?’
साधुले मलाई रोक्दै भनछन ‘कभी कभी एक सो दो सो मात्र हुन्छ कभी कभी हामी भोकै पनि बस्छ’, म फेरी अन्योलमा पर्दै सोध्न पुग्छु ‘सबै भन्दा धेरै भयो भने कती हुन्छ बाबा जी ?’ उनको जवाफ आउँछ, ‘श्रावन महिना, शिवरात्री, दुर्गा पूजा यही बेलामा मान्छेले धेरै दिन्छ ओर मन्दिर तिर पनि घुम्छ हामी त्यती बेला, पन्ध्र सो दो हजार सम्म भईहाल्छ’…, त्यती भनेर ति साधु आफ्नो पोल्टा बाँध्दै पसल बाट बाहिरिन्छन् ।
म सोचमग्न हुन्छु । मेरो सोचमग्न अवस्थालाई चिर्दै पसलेले भन्छन्,‘बिहान देखी साझ सम्म हरेक घरमा डुल्दै जादा एउटा घरले पाँच अर्कोले दस गर्दै दिदा त्यो जाबो एक हजार दुई हजार भन्दा धेरै नै हुन्छ नि नानी अनी पैसा मात्र कहाँ हुनु र, मन भएकाले त कपडा, चामल, तरकारी सब दिएर पठाउछन नि ।’
म पुन: कुरा अगाडि बढाउदै सोध्छु ‘अनी यत्रो रकमले यो एक जना व्यक्तिले के गर्छन ?’ पसलेले हाँस्दै जवाफ दिन्छन् ‘कहाँ यिनी एक्लो छन त ! यता तीन चार महिना मागेर पचास साठी हजार पुर्याउछन र केही लत्ता कपडा जम्मा पारेर आफ्नो घर भारत तिर फर्किन्छन नि, श्रीमती छोरा छोरी सबै छन यिनको ।’ पसलेले निकै नजिकबाट ति जोगीलाई चिने जसै गरेर उनको वृतान्त सुनाए । अहो ! यो दृश्यमा समाहित हुँदा त साँझले पनि आफुलाई रातको घुम्टो ओढादै रहेछ । यत्तिकैमा म पसलबाट बाहिरिन्छु ।
त्यस क्षणिक घटनालाई सम्झिदै म मनमनै हिसाब गर्छु र सोच्छु त्यस्ता हट्टा कट्टा व्यक्तिले मागेर नै एउटा परिश्रम गर्दै मजदूरी गरेर पेट पाल्ने व्यक्ति भन्दा कैयाँै गुण बढी पैसा कमाउँदो रहेछ । के परिश्रम गर्नेको संसारमा मुल्य यही हो ? के परिश्रम नगरि पैसा र समाजमा ‘साधु, बाबा, गुरु, ज्ञानी, जोगी’ भनेर नाम कमाउनु उचित हो ? के संसार यसरी नै चली रहनेछ ? यस्ता कुरा ति पसलेले हासी हासी पचाई रहेका छन के यो कुरा साच्चै नै पाच्य छ त ?
त्यस्ता सक्षम व्यक्तिहरुले त श्रमका सम्मान गर्नु नि । काम नङ्ग्रा खियाउनु नि । यस्तै प्रश्नका बीच मेरो मस्तिष्क थाकेको केही बेर पछी मेरा आँखा पनि थाक्दछन अनी म निदाउन पुग्दछु ।